Video Social Media 2013 | Martech Zone
Erik alaghachila na nke ikpeazụ ya (nke anọ) nke ihe nkiri vidiyo ya na soshal midia. Ọ bụrụ na ị paya ntị nke ọma, ụdị vidio ọ bụla na-arụ ọrụ dị egwu na igosi mgbanwe nke usoro mgbasa ozi ọhụụ a jikọtara ụwa. Ọbụna ihe nkiri dị egwu.
Tụlee na nke afọ gara aga Mgbanwe Mgbasa Ọha vidiyo ma ị ga - ahụ ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ metụtara ezigbo, mmekọrịta mmekọrịta ego n'etiti ụdị na ndị ahịa.
Erik Qualman bụ onye edemede America Ndị mmadụ, Onye ndu Dijital na Nsogbu. Ọ bụkwa onye isi okwu mba ụwa na-ekwu okwu na mkpali nke Gen Y, nduzi dijitalụ, mgbasa ozi dijitalụ na ọdịnihu.
Tags: mgbasa ozi dijitalụerik qualmanvidiyo vidiyoVidio Ahịaọhụrụ mediaọkachamaramgbanwe mgbasa ozi mmekọrịtammekọrịta ọhastatsinfographic vidiyo
Nbili nke SMB na-aga n'ihu
Buick Nchekwa onwe
Nov 8, 2012 na 12:36 AM
Anaghị m ahapụ ikwu, mana echere m na nke a bụ ọkwa dị ukwuu!